အ‌ဖွထှေကျ‌နပွေီဖွဈသောပုစ်ဆာနဲ့ တျောလှနျရေးဇာတျသိမျး (သို့) တဖကျသကျကစားပှဲနဲ့ ပွညျသူ့စညျးလုံးညီညှတျမှု အငျအား [ ခြီးနား UN VS ကမ်ဘာ နဲ့ မွနျမာ ] - Khitamyin
အ‌ဖြေထွက်‌နေပြီဖြစ်သောပုစ္ဆာနဲ့ တော်လှန်ရေးဇာတ်သိမ်း (သို့) တဖက်သက်ကစားပွဲနဲ့ ပြည်သူ့စည်းလုံးညီညွတ်မှု အင်အား [ ချီးနား UN VS ကမ္ဘာ နဲ့ မြန်မာ ]
စကစကို အချိန်ဆွဲ ပေးကစားထားပြီး NUG ကို ဘောလီပေါပုတ် ခြေယောင်ပြ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်ထားတာ လယ်ဗယ်ယှဉ်ပြေးပြီး ပန်းတိုင်ရောက်သူ လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့
သို့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့စည်းအင်အားပါဝင် ထောက်ခံမှု ပြည်သူအင်အားပါဝင် ဆော်ဩမှုကြောင့် ဒိူင်ဖြစ်သူ UN ဟာ ဘက်လိုက်မရပဲ NUG ပဲ တဖြေးဖြေး တွန်းအား‌ကြောင့် နဲ့နဲ့လာပြီး ရွေ့လာနေတယ်
ခုနေထားက တိမ်းစောင်းနေဟန်အနေထား တည့်တည့်မက်မက် မကျသေး လက်မခံသေးဘူး ချီးနားအရှိန်ဝါကြောင့် စကစကိူ ရသလောက် အချိန်ဆွဲ ကာပေး ကစား‌နေတာ
ဒီတော့ စကစဟာလည်း အာဏာစသိမ်းကတည်းက သူတိူ့နိုင်မယ် တွက်ထားပြီးသား အကြောင်းက စစ်တပ်ဟာ တွက်ချက်ပြီးမှ အကြံနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေ ဒီတော့ ပွဲစမှာ နိုင်မယ်လို့ တထစ်ချသက်မှတ် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ခုနေထားမှာ ပြည်သူအင်အားက လျော့မကျသွားတဲ့အတွက်
နောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အနေထားအရ စကစဟာ ဒီပွဲ အနိုင်ရလာဒ်ကို ၂၀% သာ ထားထားပြီး ၈၀% လောက်က အရှုံးတော့မခံဘူး ရသလောက် တွယ်ကပ်ဖိထား အုပ်စိုးကြည့်အုံးမယ်ဆိုတဲ့ အနေထားမျိုးနဲ့သာ ရပ်တည် လုပ်‌ဆောင်နေတာကို တွေ့ရတယ်
သဘောက သူတိူ့အနေထား သူတို့သိသလို UN အချိန်ဆွဲပေးထားမှုမှာလည်း ပြည်သူကြောင့် ဂွင်တွေ ရလာဒ်တွေပျက်ပြီး မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ပြည်သူနဲ့ NUG အလေးသာနေမှုကို UN က လက်မခံချင်လည်း ရလာဒ်အနေနဲ့ လက်ခံ ထောက်ခံလာရတော့တယ်
ဒီတော့ သူတို့ မနိုင်လောက်တော့ဘူး ကျရှူံးတော့မယ်ဆိုတာ သိတဲ့ စကစအနေနဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ပြေးရင်တောင် ၀ရုန်းသူံးကားနဲ့ အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲမဖြစ်ရလေအောင် အနိုင်ရလာဒ်ကို ရသလောက်ယူကြည့်ပြီး ဖက်တွယ်ထားအုံးမယ်ဆိုတဲ့ အကြံဗျူဟာတွေနဲ့
ပြည်သူကို သူသေကိုယ်ရှင်ဆိုပြီး ကိုဗစ်နဲ့ တိုက်ဖွင့် ကန်ကစားတယ် ခု စစ်ရေးတွေပြင်ဆင်ပြီး PDF EAOs တွေကို ရသလောက်ထိန်းကြည့်ဖို့ ထိုးစစ်ဆင်လာနေတယ် ဒီတော့ ဒါပြီးရင် ဘာလာမလဲဆို ပြည်သူတွေ သတိထားရမှာက နောက်ဆုံး D Day ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ခင် ကြားထဲမှာ UN အရေးယူမှုတွေ ၀င်မလာနိုင်အောင်
– ရေကာတာတွေ ဖောက်ချနိုင်တယ်
– စစ်ရေးတွေ နေရာစုံ ဖြန့်ကျက်လာနိုင်တယ်
– ပြည်သူနဲ့ PDF တွေကို န်ှမ်နင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်မယ်
ဒါက သူတိူ့လက်ဦးမှု ပလန်တွေပေါ့ နောက် မသိနိုင်သေးတဲ့အခြားပလန်တွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်
ဒီတော့ အထက်ပါ ယုတ်ညံ့မှုတွေထပ်လုပ်ရင် UN က အရေးယူမှုတွေ ချက်ခြင်းဝင်လာမှာပေါ့လို့ မတွေးဆကြနဲ့ ခု UK က ၀င်ခိုင်းနေတာ မ၀င်ရင် မြန်မာတ၀က်သေကြေပျက်စီးမယ်ပြောနေတာတောင် တုတ်တုတ်မျှမလုပ်ပဲ ချီးနားအတွက် အချိန်ဆွဲပေးနေတဲ့ UN ကို မျော်ကိုးတာထက် ယုံကြည်လို့မရကြောင်း
ထိုအတွက် ပြည်သူတွေ လုပ်ရမှာက
#ပြည်တွင်း D Day အစပျိုးမှုနဲ့
ရရှိပြီး ကူညီနိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရင်း
စကစမအလတွေက သူတို့ခံစစ်စည်းကို ထွက်မပြေးခင်ထိ ရသလောက်ကာရံထားပြီး အာဏာကို လက်မလွတ်ဖို့ နောက်ဆုံးထိ ခံချအုံးမှာဖြစ်လေသည် သည်နောက်မှ မန်ုင်သည့်အဆုံး ထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ကြလိမ့်မည်
သို့အတွက် ခုချိန်မှာတော့ ရှုံးမှာသိတဲ့ အဖြေထွက်နေတဲ့ပွဲမှာ သူတိူ့ရှင်သန်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပြည်သူကို သူသေကိုယ်ရှင် နွှဲဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီ လက်တွေ့လည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ သိရင် ကျနော်တို့လည်း တန်ပြန် D Day စဖို့ လိုပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးရင်း ရန်သူ့နောက်ကောက်မကျရလေအောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် လက်ဦးကြပါစို့ဟု အသိပေးရင်း
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် !!
စကစကို အခြိနျဆှဲ ပေးကစားထားပွီး NUG ကို ဘောလီပေါပုတျ ခွယေောငျပွ ရှတေို့း နောကျဆုတျ လုပျထားတာ လယျဗယျယှဉျပွေးပွီး ပနျးတိုငျရောကျသူ လကျခံမယျဆိုတဲ့ အကွံနဲ့
သို့ပမေယျ့ ကမ်ဘာ့အဖှဲ့စညျးအငျအားပါဝငျ ထောကျခံမှု ပွညျသူအငျအားပါဝငျ ဆျောဩမှုကွောငျ့ ဒိူငျဖွဈသူ UN ဟာ ဘကျလိုကျမရပဲ NUG ပဲ တဖွေးဖွေး တှနျးအား‌ကွောငျ့ နဲ့နဲ့လာပွီး ရှလေ့ာနတေယျ
ခုနထေားက တိမျးစောငျးနဟေနျအနထေား တညျ့တညျ့မကျမကျ မကသြေး လကျမခံသေးဘူး ခြီးနားအရှိနျဝါကွောငျ့ စကစကိူ ရသလောကျ အခြိနျဆှဲ ကာပေး ကစား‌နတော
ဒီတော့ စကစဟာလညျး အာဏာစသိမျးကတညျးက သူတိူ့နိုငျမယျ တှကျထားပွီးသား အကွောငျးက စဈတပျဟာ တှကျခကျြပွီးမှ အကွံနဲ့လုပျတဲ့သူတှေ ဒီတော့ ပှဲစမှာ နိုငျမယျလို့ တထဈခသြကျမှတျ လုပျခဲ့ပမေယျ့ ခုနထေားမှာ ပွညျသူအငျအားက လြော့မကသြှားတဲ့အတှကျ
နောကျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးစာမကျြနှာ လုပျဆောငျမှုတှေ အနထေားအရ စကစဟာ ဒီပှဲ အနိုငျရလာဒျကို ၂၀% သာ ထားထားပွီး ၈၀% လောကျက အရှုံးတော့မခံဘူး ရသလောကျ တှယျကပျဖိထား အုပျစိုးကွညျ့အုံးမယျဆိုတဲ့ အနထေားမြိုးနဲ့သာ ရပျတညျ လုပျ‌ဆောငျနတောကို တှရေ့တယျ
သဘောက သူတိူ့အနထေား သူတို့သိသလို UN အခြိနျဆှဲပေးထားမှုမှာလညျး ပွညျသူကွောငျ့ ဂှငျတှေ ရလာဒျတှပေကျြပွီး မလိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ ပွညျသူနဲ့ NUG အလေးသာနမှေုကို UN က လကျမခံခငျြလညျး ရလာဒျအနနေဲ့ လကျခံ ထောကျခံလာရတော့တယျ
ဒီတော့ သူတို့ မနိုငျလောကျတော့ဘူး ကရြှူံးတော့မယျဆိုတာ သိတဲ့ စကစအနနေဲ့ နောကျဆုံးထှကျပေါကျအနနေဲ့ ပွေးရငျတောငျ ဝရုနျးသူံးကားနဲ့ အရှကျတကှဲ အကြိုးနဲမဖွဈရလအေောငျ အနိုငျရလာဒျကို ရသလောကျယူကွညျ့ပွီး ဖကျတှယျထားအုံးမယျဆိုတဲ့ အကွံဗြူဟာတှနေဲ့
ပွညျသူကို သူသကေိုယျရှငျဆိုပွီး ကိုဗဈနဲ့ တိုကျဖှငျ့ ကနျကစားတယျ ခု စဈရေးတှပွေငျဆငျပွီး PDF EAOs တှကေို ရသလောကျထိနျးကွညျ့ဖို့ ထိုးစဈဆငျလာနတေယျ ဒီတော့ ဒါပွီးရငျ ဘာလာမလဲဆို ပွညျသူတှေ သတိထားရမှာက နောကျဆုံး D Day ပွညျတှငျးစဈမဖွဈခငျ ကွားထဲမှာ UN အရေးယူမှုတှေ ဝငျမလာနိုငျအောငျ
– ရကောတာတှေ ဖောကျခနြိုငျတယျ
– စဈရေးတှေ နရောစုံ ဖွနျ့ကကျြလာနိုငျတယျ
– ပွညျသူနဲ့ PDF တှကေို နျှမျနငျး ဖမျးဆီးမှုတှေ လုပျမယျ
ဒါက သူတိူ့လကျဦးမှု ပလနျတှပေေါ့ နောကျ မသိနိုငျသေးတဲ့အခွားပလနျတှလေညျး ရှိလာနိုငျပါသေးတယျ
ဒီတော့ အထကျပါ ယုတျညံ့မှုတှထေပျလုပျရငျ UN က အရေးယူမှုတှေ ခကျြခွငျးဝငျလာမှာပေါ့လို့ မတှေးဆကွနဲ့ ခု UK က ဝငျခိုငျးနတော မဝငျရငျ မွနျမာတဝကျသကွေပေကျြစီးမယျပွောနတောတောငျ တုတျတုတျမြှမလုပျပဲ ခြီးနားအတှကျ အခြိနျဆှဲပေးနတေဲ့ UN ကို မြျောကိုးတာထကျ ယုံကွညျလို့မရကွောငျး
ထိုအတှကျ ပွညျသူတှေ လုပျရမှာက
#ပွညျတှငျး D Day အစပြိုးမှုနဲ့
ရရှိပွီး ကူညီနိုငျအောငျ ကွိုးစားရတော့မှာဖွဈကွောငျး အသိပေးရငျး
စကစမအလတှကေ သူတို့ခံစဈစညျးကို ထှကျမပွေးခငျထိ ရသလောကျကာရံထားပွီး အာဏာကို လကျမလှတျဖို့ နောကျဆုံးထိ ခံခအြုံးမှာဖွဈလသေညျ သညျနောကျမှ မနျုငျသညျ့အဆုံး ထှကျပွေးဖို့ လုပျကွလိမျ့မညျ
သို့အတှကျ ခုခြိနျမှာတော့ ရှုံးမှာသိတဲ့ အဖွထှေကျနတေဲ့ပှဲမှာ သူတိူ့ရှငျသနျလှတျမွောကျဖို့အတှကျ ပွညျသူကို သူသကေိုယျရှငျ နှဲဖို့ ပွငျဆငျထားပွီ လကျတှလေ့ညျး လုပျဆောငျနတေယျဆိုတာ သိရငျ ကနြျောတို့လညျး တနျပွနျ D Day စဖို့ လိုပွီဖွဈကွောငျး သတိပေးရငျး ရနျသူ့နောကျကောကျမကရြလအေောငျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျ လကျဦးကွပါစို့ဟု အသိပေးရငျး
အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ !!